Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Drugs and Kidneys ကျောက်ကပ်အပေါ် သက်ရောက်စေတဲ့ ဆေးတွေ
29 Oct 10, 09:32
ဆရာရှင့် ဆေးပြင်းတွေ သောက်ရင် ကျောက်ကပ် ပျက်စီးတတ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် တားဆေးတွေ ကရော ကျောက်ကပ်ကို ပျက်စီးစေပါသလား။ ပြီးတော့ ဘယ်လိုအကြောင်းတွေက ကျောက်ကပ်ကို ပျက်စီးစေပါသလဲရှင့်။
ဆေးမှန်သမျှ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ သက်ရောက်မှု၊ ထိခိုက်မှုနေရာတွေ မတူကြဘူး။ ကျောက်ကပ်တခုထဲ ကွက်ပြီး ရေးပါမယ်။
နှလုံး၊ အသဲ၊ ကျောက်ကပ် မကောင်းတော့တာကို ဆေးစာလို ပြောရင် Failure “ကျရှုံးသွားတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ ကျောက်ကပ် ဘာလို့ ကျရှုံးသလဲ။
1. Nephrons ခေါ်တဲ့ Filtering capacity စစ်ထုတ်တာ လုပ်ပေးတဲ့နေရာကို သွားထိခိုက်လို့ ဖြစ်ရတယ်။ အမြန်အဆန် ဖြစ်တာက Injury ထိခိုက်လို့၊ Poisoning အဆိပ်သင့်လို့ ဖြစ်တယ်။ ဖြေးဖြေးဖြစ်တာက Diabetes ဆီးချို နဲ့ High blood pressure သွေးတိုးရောဂါတွေ ဖြစ်တယ်။ သွေးတိုးကျ ဆေးတွေထဲက ACE inhibitors and ARBs ဆေးအုပ်စုတွေက ကျောက်ကပ်ကို တခြားဆေးတွေထက် အကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်။ မျိုးရိုး လိုက်တတ်တာလဲ မှတ်သားမိတယ်။
2. Glomerular Diseases ခေါ်တဲ့ ရောဂါတွေကြောင့်လဲ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးစေနိုင်တယ်။
a. Autoimmune diseases,
b. Infection-related diseases, and
c. Sclerotic diseases တွေပါတယ်။
ကျောက်ကပ်ထဲက သွေးကြော သေးသေး လေးတွေ စုဝေးနေတဲ့နေရာကို ထိတာပါ။ ဆီးစစ်ရင် ဆီးထဲမှာ Proteinuria အနယ်ပါနေမယ်။ Hematuria သွေး ပါနေမယ်။ ဒီရောဂါကို ကုတဲ့အခါ Immunosuppressive drugs or Steroids တွေပေးရပြန်တယ်။
3. Inherited and Congenital Kidney Diseases မွေးရာပါ၊ မျိုးဗီဇကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေလဲ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးစေတဲ့ရောဂါတွေထဲမှာ ပါတယ်။ ဥပမာ Polycystic kidney disease (PKD) ရောဂါ။
Immunosuppressive drugs ဆိုတဲ့ ရောဂါပြီးစနစ်ကို သက်ရောက်စေတဲ့ ဆေးအမျိုးအစားကလဲ ကျောက်ကပ်ကို ထိတယ်။ Glucocorticoids, Cytostatics, Antibodies, Drugs acting on immunophilins တွေနဲ့ တခြား ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒီဆေးမျိုးတွေက ကျောက်ကပ်၊ နှလုံး၊ အသဲ၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ လဲရသူတွေကို ပေးတာပါ။ နောက်ပြီး Rheumatoid arthritis, Multiple sclerosis, Myasthenia gravis, Systemic Lupus Erythematosus, Crohn's disease, Pemphigus, Ulcerative colitis ဆိုတဲ့ ရောဂါတွေ အတွက် ပေးတယ်။ နာတာရှည် အလာဂျီနဲ့ ဆက်နေတဲ့ ပန်းနာရောဂါမှာလဲ သုံးတတ်တယ်။
မူးယစ်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ Heroin, Inhalants, MDMA, PCP တွေသုံးရင်တော့ သိသာတယ်။ ကျောက်ကပ် ကောင်းကောင်း ဖွံ့ထွားမှု မရှိသေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ Vasoactive or Diuretic drugs (Furosemide) ဆိုတဲ့ ဆီးသွားစေမဲ့ဆေးတွေ ကလေး ပေးရင်ဖြစ်ဖြစ် မအေကနေတဆင့် ရတာဖြစ်ဖြစ်၊ Postnatal anuria ဆိုတဲ့ ဆီးမသွားရောဂါအထိ ရစေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေက ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ မှတ်မှတ်သားသား မရှိပါ။
ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်ဝယ်လို့ရတဲ့ ဆေးတွေထဲမှာ ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်တာတွေ ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကနေ ညွှန်းမှ ဝယ်ရတာတွေထဲမှာလဲ ပါတယ်။
• Diclofenac အနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေး၊
• Furosemide or Frusemide (Lasix) ဆီးအတင်းသွားစေတဲ့ဆေး၊
• Amicip, Amikacin sulphate, Amikacin, Amoxicillin, Ampicillin, Carbenicillin, Cloxacillin, Colistin, Dicloxacillin, Gentamicin, Gentamicin, Kanamycin, Nafcillin, Neomycin, Neomycin, Netilmicin, Oxacillin, Penicillin G, Penicillin V, Piperacillin, Polymyxin B, Streptomycin, Streptomycin, Ticarcillin, Tobramycin ပဋိဇီဝဆေးတွေ
• Cox Kit တီဘီဆေး၊
အများသိ၊ အမြဲသောက် ဆေးတွေထဲက အနာ-အကိုက်-အဖျား သက်သာဆေး Pain killers တွေကို သတိထား စေချင်တယ်။ Non-Steroidal Antiinflammatory Drugs (NSAID) လို့ ခေါ်တယ်။
1. ကျောက်ကပ်ထဲ ဝင်တဲ့ သွေး စီးဆင်းမှု၊
3. (ဆိုဒီယမ်) နဲ့ (ပိုတက်စီယမ်) တွေ စွန့်ထုတ်ပေးမှု၊ ဆိုတာတွေအပေါ် သက်ရောက်စေတယ်။
သက်ကြီးလူနာ ၇၅ ယောက်ကို Paracetamol 1000 mg IV ထိုးပြီးစမ်းသပ်လို့ ပြောနိုင်တာပါ။ အဆိုးကြီးတော့ မဟုတ်ပါ။
နဂိုအခံကိုက ကျောက်ကပ် မကောင်းသူတွေမှာသာ ပိုသိသာတယ်။ ကိုယ်ရောင်တာ၊ အရည်တွေ အောင်းနေတာ ဖြစ်လာတယ်။ မသိသာလှပါဘူး ၅% လောက်သာ မျက်စိနဲ့ မြင်ရတယ်။ ဆေးဖြတ်လိုက်ရင် ပြန်ကောင်းပါတယ်။
လိုတော့လဲ “ဆေးခါးကြီး” သောက်ကြရတာဘဲ မဟုတ်ပါလား။